Crypto Escudo စျေး - အွန်လိုင်း CESC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Crypto Escudo (CESC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Crypto Escudo (CESC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Crypto Escudo ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $159 655.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Crypto Escudo တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Crypto Escudo များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Crypto EscudoCESC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00109Crypto EscudoCESC သို့ ယူရိုEUR€0.000922Crypto EscudoCESC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000833Crypto EscudoCESC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000994Crypto EscudoCESC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00989Crypto EscudoCESC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00687Crypto EscudoCESC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0241Crypto EscudoCESC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00405Crypto EscudoCESC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00145Crypto EscudoCESC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00152Crypto EscudoCESC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0246Crypto EscudoCESC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00845Crypto EscudoCESC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00577Crypto EscudoCESC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0817Crypto EscudoCESC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.183Crypto EscudoCESC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00149Crypto EscudoCESC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00164Crypto EscudoCESC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0338Crypto EscudoCESC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00758Crypto EscudoCESC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.115Crypto EscudoCESC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.3Crypto EscudoCESC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.42Crypto EscudoCESC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0799Crypto EscudoCESC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0302
Crypto EscudoCESC သို့ BitcoinBTC0.0000001 Crypto EscudoCESC သို့ EthereumETH0.000003 Crypto EscudoCESC သို့ LitecoinLTC0.00002 Crypto EscudoCESC သို့ DigitalCashDASH0.00001 Crypto EscudoCESC သို့ MoneroXMR0.00001 Crypto EscudoCESC သို့ NxtNXT0.0901 Crypto EscudoCESC သို့ Ethereum ClassicETC0.000153 Crypto EscudoCESC သို့ DogecoinDOGE0.311 Crypto EscudoCESC သို့ ZCashZEC0.00001 Crypto EscudoCESC သို့ BitsharesBTS0.0419 Crypto EscudoCESC သို့ DigiByteDGB0.0415 Crypto EscudoCESC သို့ RippleXRP0.00366 Crypto EscudoCESC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00004 Crypto EscudoCESC သို့ PeerCoinPPC0.00377 Crypto EscudoCESC သို့ CraigsCoinCRAIG0.508 Crypto EscudoCESC သို့ BitstakeXBS0.0475 Crypto EscudoCESC သို့ PayCoinXPY0.0195 Crypto EscudoCESC သို့ ProsperCoinPRC0.14 Crypto EscudoCESC သို့ YbCoinYBC0.0000006 Crypto EscudoCESC သို့ DarkKushDANK0.357 Crypto EscudoCESC သို့ GiveCoinGIVE2.41 Crypto EscudoCESC သို့ KoboCoinKOBO0.246 Crypto EscudoCESC သို့ DarkTokenDT0.001 Crypto EscudoCESC သို့ CETUS CoinCETI3.22
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 07:20:01 +0000.